Kedu smartwatches na olee mgbe ha ga-enweta Android Wear 2.0 | Gam akporosis
Kedu smartwatches na olee mgbe ha ga-enweta Android Wear 2.0
Gam akporo Wear bụ sistemụ arụmọrụ nke Google maka smart nche. Mgbe ebuputachara nke mbu na 2014, o rue na February nke afo a, mgbe otutu igbu oge, ka onye na-acho ihe ohuru gosiputara ohuru nke OS a wearable, gam akporo Wear 2.0, nke yiri ka odi nnukwu ihe.
Kacha ọhụrụ nke 2.0 Weebụ Weebụ bụ nke ahụ bẹ nwekwaru onwiya Ọ na-agụnye ya ngwa ngwa, mma ificationsma Ọkwa, a ọhụrụ Google Fit ngwa na kwa, ọ bụ ọtụtụ mara ihe ekele Google Assistant (naanị ebe enwere ya) na Nsogbu ya. Yabụ, ị na-eche ma ọ bụrụ na ị ga-enweta mmelite a. Ọ bụrụ otu a, taa ị ga-ahapụ obi abụọ gị.
1 Kedu smartwatches ga - enweta mmelite gam akporo Wear 2.0?
2 Kedu smartwatches ndị nwere gam akporo Wear 2.0?
Kedu smartwatches ga - enweta mmelite gam akporo Wear 2.0?
Ọ bụ ezie na ọtụtụ smartwatches ga-enweta gam akporo Wear 2.0 mbipute, ọtụtụ n'ime igwe mbu nke ngwaọrụ agaghị emelite. Anya dị ka Moto 360, LG G Watch ma ọ bụ Samsung Gear Live malitere na 2014 anaghị ahazi iji nweta mmelite ahụ, dịka ASUS ZenWatch na Sony SmartWatch 3.
Kama nke ahụ, smartwatches ndị ọzọ ga - enweta 2.0 Weebụ Weebụ n'oge ae mere atụmatụ (ọ bụrụ na a mara ya):
Motorola Moto 360 (ọgbọ nke abụọ), ọ dịghị ụbọchị ekwuputala.
Motorola Moto 360 Sport, ọ dịghị ụbọchị ekwuputala.
LG Watch Urbane 2nd Edition LTE, Mmalite Mee 2017
New Balance RunIQ, Eprel 14, 2017
Huawei Watch na Huawei Watch Ladies, kwupụtara maka njedebe nke March ma na-egbu oge
ASUS ZenWatch 2, Oge mbido 2017
ASUS ZenWatch 3, Oge mbido 2017
Kedu smartwatches ndị nwere gam akporo Wear 2.0?
Kemgbe mmalite ya, Gam akporo Wear 2.0 abanyelarị ngwaọrụ ndị a:
Igwe Casio Smart (WSD-F10)
Offọdụ elekere na ndepụta ndị dị n'elu nwere ike ịmalite ị nweta mmelite ahụ n'oge na-adịbeghị anya (dịka LG Watch Urbane na G Watch R) na ọ nwere ike ọ gaghị agbatịla ya na ngwaọrụ niile, mana ị ga-enweta ya n'oge ọ bụla, ndidi.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » smartwatch » Kedu smartwatches na olee mgbe ha ga-enweta Android Wear 2.0
Ọ dị ka ha agbaferela Sony
Zaghachi Vicente Sancho
Ee, ebe ọ bụ na ọnwa nke ọnwa Febụwarị mgbe Android Wear 2.0 malitere, Sony yiri ka ọ dị obere. Ma o doro anya, ọ na-aga n'ihu na-aga n'ihu. O doro anya, ọrụ dịịrị ndị nwere otu.
Ana m ekele gị nke ukwuu maka okwu gị. Echiche kacha mma!
Jọ na ọdachi "idetuo, ịsụgharị na mado" nke edemede a. Adabala maka iru ala biko.
Zaghachi Luis Felipe Infante
Ọnye na -bụ Alejandra Ramirez? dijo
Ndewo, enwetara m LG Watch Urbane na nso nso a, ọ na-agwakwa m na njehie mere mgbe m gbalịrị imelite (echere m na nke 2.0) ebe ọ bụ na ụdị nke m nwere Soft bụ Android Wear 1.5
Zaghachi Alejandra Ramirez
Ndewo Alejandra. Mgbasa nke mmelite ahụ bụ "enweghị ngwa ngwa" yabụ, agbanyeghị na nyochapụtara ya, ewepụtara ya oge ịbịarute, dịka m rụtụrụ aka na njedebe post. Ọ dị ka nke a ọ̀ bụ maka gị ka ị ga-eji ndidi na-eyiri onwe gị.
Ekele m na-ekele gị nke ukwuu maka isonye.
Ma ọ bụ ihe ị na-atụ uche ihe ọ bụla ma ọ bụrụ na ị melite. N'ezie, mgbe ị mere ya, ị ga-efunahụ »Ok Google» na nkịtị na-arụ ọrụ ya. O nweghikwa mfe iji ya / ma ọ bụ njikwa ya dị nfe, nke bụ ihe elekere chọrọ. Obi nkoropụ. O nwere ike ime ka gam akporo eyi mara mma.
You maara ụbọchị anyị bụ?
Huawei nche ọgwụgwụ nke March?
M na-ajụ otu ihe ahụ, ana m echere ya ka ọ bịa na elekere Huawei maka ogologo oge ugbu a ...
Google na-anwale ụzọ ọhụrụ iji mụta ihe na data gị mgbe ị na-echebe nzuzo